Linksys RE6300 / RE6400 အသုံးပြုသူလမ်းညွှန် - လက်စွဲစာအုပ် +
Linksys RE6300 / RE6400 အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
Posted by ကိုadmin ရဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ 21, 2019 မှတ်ချက် Leave Linksys RE6300 / RE6400 အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်ပေါ်မှာ
ပင်မစာမျက်နှာ » Linksys » Linksys RE6300 / RE6400 အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
ဒီသုံးစွဲသူလမ်းညွှန်သည် extender ကိုသင်၏ network နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်နှင့်အသုံးများသော setup ပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းရန်ကူညီနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုရသော၊ ၂၄/၇ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူထံမှ Linksys.com/support မှပိုမိုသောအကူအညီကိုသင်ရနိုင်သည်။
RE6300 တပ် ဦး
RE6400 တပ် ဦး
range extender ၏ရှေ့ဘက်မှအလင်းသည်စွမ်းအား၊ မွမ်းမံခြင်းနှင့်အချက်ပြစွမ်းအားနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်။
ပါဝါ Switch ဥရောပမူကွဲသာ။
ဝိုင်ဖိုင်အကာအကွယ်တည်ဆောက်မှုခလုတ်နှင့် LED ကွန်ယက်သို့လိုက်ဖက်သောကြိုးမဲ့ကိရိယာများကိုအလိုအလျှောက်နှင့်လုံလုံခြုံခြုံထည့်ရန် Wi-Fi Protected Setup ကိုသုံးပါ။ စာမျက်နှာ7ရှိ Wi-Fi Protected Setup ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုကြည့်ပါ။
ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းစက်ရုံသတ်မှတ်ချက်များမှပြန်လည်သတ်မှတ်ရန် ၅ စက္ကန့်ခန့် နှိပ်၍ ဖိထားပါ။ Extender ၏ Browser-based utility တွင်အုပ်ချုပ်ရေး> စက်ရုံပုံမှန်မြင်ကွင်းမှပြန်လည်ပေးဆပ်နိုင်ပါသည်။
Ethernet (အပြာရောင်) ကြိုးမဲ့ကိရိယာများကိုသင်၏ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်သို့ Ethernet (network) ကေဘယ်များဖြင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ Ethernet device တစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ပြီးဒီ port ပေါ်မှာတက်ကြွလာသောအခါအစိမ်းရောင်မီးသည်ဖွင့်သည်။ Ethernet port မှတဆင့်အချက်အလက်ပေးပို့ခြင်းသို့မဟုတ်လက်ခံခြင်းကိုတိုးချဲ့သည့်အချိန်တွင်မီးသည်လင်းသည်။
အကွာအဝေး extender ကို install လုပ်နည်း
1. Wi-Fi မရှိပဲသင်၏ router နှင့်betweenရိယာကြားရှိအကွာအဝေးကိုဖြတ်သန်းသွားသောအကွာအဝေးအတွင်းသို့ဆက်သွယ်ပါ။
သင်ချိန်ညှိရန်အတွက်သင်အသုံးပြုမည့်စက်ပေါ်တွင်သင်၏ Router ၏ Wi-Fi အချက်ပြမှုအနည်းဆုံး ၅၀% ရှိသည်။ အကယ်၍ ပြhaveနာရှိလျှင် setup software သည်သင့်ကိုအကောင်းဆုံးနေရာရှာရန်ကူညီလိမ့်မည်။
2. အကွာအဝေး extender ၏အဖုံးပေါ်တွင်အစိုင်အခဲအလင်းစောင့်ပါ။ နှစ်မိနစ်လောက်ကြာနိုင်တယ် ကွန်ပျူတာ၊ ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တွင် Wi-Fi ကွန်ယက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ ” Linksys Extender Setup”
3. အကယ်၍ setup ကိုအလိုအလျောက်မစတင်ဘူးဆိုရင် http://extender.linksys.com သို့ Browser တစ်ခုကိုဖွင့်ပါ။
Linksys ၏ရှာဖွေစက်သည်သင်ပြhaveနာရှိပါကသင်၏ range extender အတွက်မှန်ကန်သောနေရာကိုရှာဖွေရန်ကူညီလိမ့်မည်။ အချက်ပြမှုတိုးတက်စေရန်သင်၏ router နှင့်ဝေးကွာသော range extender ကိုနေရာချရန်သင့်အားလမ်းညွှန်လိမ့်မည်။ သင်၏ပထမဆုံးနေရာချထားမှုတွင်သင်သံရိုက်ခတ်ပါက Spot finder ဖန်သားပြင်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
၄။ Setup လုပ်နေစဉ်အတွင်း extender extender သည်သူ့ဟာသူအလိုအလျောက် update လုပ်လိုပါသလားဟုမေးလိမ့်မည်။ သင်အလိုအလျှောက်မွမ်းမံခြင်းကိုခွင့်ပြုပါက Linksys မှဖြန့်ချိသောအခါ range extender သည် updates များကို download လုပ်ပြီး install လုပ်လိမ့်မည်။ သူတို့သည်သင်၏ network လုပ်ဆောင်မှုကိုအနှောင့်အယှက်မပေးသောကြောင့်အလိုအလျှောက်မွမ်းမံမှုများတစ်ညတည်းဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်၏ range extender ကိုသင့်အဆင်ပြေစွာမွမ်းမံရန်လည်းဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
Post-set-LED အပြုအမူများကိုဤနေရာတွင်သာမက QSG တွင်ပါဖော်ပြထားသည်
Wi-Fi Protected Setup ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် range extender ကိုလည်းဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိရန်
သတင်းအချက်အလက်များကိုစာမျက်နှာ ၇ ရှိ“ ဝိုင်ဖိုင်အကာအကွယ်သတ်မှတ်မှုအသုံးပြုခြင်း” တွင်ကြည့်ပါ
အထူးအင်္ဂါရပ် - ဂီတ streaming
ဂီတကိုသင်၏ AC1200 MAX အကွာအဝေးမှတိုးချဲ့ထားသောဆက်သွယ်ထားသောစပီကာများသို့စီးဆင်းပါ။
iOS ထုတ်ကုန်များ -
? iOS device ကို Wi-Fi နက်ဝပ်နဲ့သင်၏ range extender နဲ့ချိတ်ဆက်ပါ။
? Linksys Range Extender ကိုနှိပ်ပါ။
Samsung Galaxy အတွက်
? Galaxy Device ကိုသင်၏ range extender ကဲ့သို့ Wi-Fi နက်ဝပ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။
? တေးသီချင်းဖိုင်ကိုရွေးချယ်ပြီး Screen Mirroring အိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပါ
? Linksys Range Extender ကိုရွေးပါ။
သင်၏စက်ပုံစံနှင့် Android ဗားရှင်းပေါ် မူတည်၍ သင်၏မျက်နှာပြင်ကွဲပြားနိုင်သည်။
အခြား Android ထုတ်ကုန်များအတွက် MediaHouse၊ UPnPlay, Skifita, ArkMC နှင့်တေးဂီတကိုလွှင့်နိုင်သည်။
BubbleUPnP, Pixel Media နှင့် 2Player 2.0 ။
? Windows Media Player ကိုဖွင့်ပါ
? တေးသီချင်းဖိုင်ပေါ်တွင် Right-click နှိပ်၍ Linksys Range Extender ကိုရွေးချယ်ပါ။
? ၀ င်းဒိုးသုံးစွဲသူများသည်သီချင်းများကို Windows Media Player12 ဖြင့်လွှင့်နိုင်သည်။
? Mac အသုံးပြုသူများသည်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲသို့မဟုတ် SofaPlay အက်ပ်ဖြင့်ဂီတကိုလွှင့်နိုင်သည်။
? Android အသုံးပြုသူများသည် MediaHouse, UPnPlay, Skifita, ArkMC, BubbleUPnP, Pixel Media နှင့် 2Player 2.0 တို့ဖြင့်သီချင်းများကိုလွှင့်နိုင်သည်။
? iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod အပါအ ၀ င် iOS ထုတ်ကုန်များသည်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲလ်သို့မဟုတ် ArkMC, Smartstor Fusion၊ Mconnect နှင့် DK UPnP / DLNA ကဲ့သို့သောအခြားအက်ပလီကေးရှင်းများမှတေးဂီတကိုလွှင့်နိုင်သည်။
? ထုတ်လွှင့်သူသည် MP3, FLAC, WAV, WMA နှင့် AAC ဖိုင်ပုံစံများကိုထုတ်လွှင့်နေသည့်ကိရိယာနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းမှပံ့ပိုးထားသရွေ့၎င်းဖိုင်များကိုထောက်ပံ့သည်။
? ၃.၅ မီလီမီတာစတီရီယို port သည်နားကြပ်များနှင့်စွမ်းအားပြည့်စပီကာများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်
browser-based utility ကိုဘယ်လိုရယူမလဲ
Extender ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက် Exterder Browser-based utility ကို အသုံးပြု၍ မည်သည့် settings ကိုမဆိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
သင်၏ range extender နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကွန်ပျူတာ (သို့) စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်မည်သည့် browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari စသည်ဖြင့်) ဖွင့်ပြီး extender ကိုထည့်ပါ။ လိပ်စာဘားမှာ linksys.com ။
အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ရန်သင့်အားတောင်းလိမ့်မည်။ Setup လုပ်နေစဉ်အတွင်း၎င်းတို့ကိုသင်မပြောင်းလဲပါကအသုံးပြုသူအမည်ကိုကွက်လပ် ထား၍“ admin” ကိုစကားဝှက်နေရာလပ်များထဲသို့ထည့်ပါ။ သင် SSID နှင့်စကားဝှက်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်လျှင်၊ ထိုအထောက်အထားများကိုထည့်သွင်းပါ။
သင်သည်သင်၏ local network ကိုချိတ်ဆက်ထားသော်လည်း range extender နှင့်မချိတ်ဆက်ပါက extender ၏ IP Address ကိုသင်၏ browse တွင်ဖြည့်ရန်လိုအပ်သည်။
Windows XP ကို:
၁။ UPnP ကိုဖွင့်ပါ။
က) Start, Control Panel၊ Add သို့မဟုတ် Remove Program ကိုနှိပ်ပါ။ Add / Remove Windows Components ကိုနှိပ်ပါ။
(ဂ) UPnP User Interface ကိုရွေးပြီး OK ကိုနှိပ်ပါ။
၂) Windows Explorer ကိုဖွင့်ပါ။ ဘယ်ဘက် panel ရှိ My Network Places ကိုနှိပ်ပါ။
3. ညာဘက် panel မှ RE6700 အိုင်ကွန်ကိုရှာပါ။ (သင်ညွှန်ကြားချက်များအတွက် firewall ကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ )
Windows 8, Windows7သို့မဟုတ် Vista:
၁။ Windows Explorer ကိုဖွင့်ပါ (Windows 1 ရှိ File Explorer) ။ Network ကိုနှိပ်ပါ။ RE8 ပုံသင်္ကေတကိုရှာပါ။ (ကွန်ယက်ကွန်ပျူတာများကိုပြသရန်ခွင့်ပြုရန် firewall settings ကိုပြောင်းလဲရန်သင်လိုအပ်နိုင်သည်။ ညွှန်ကြားချက်များအတွက်သင်၏ operating system အကူအညီကိုရည်ညွှန်းပါ။ )
RE2 ပုံသင်္ကေတကိုနှိပ်ပါ။ Properties ကိုနှိပ်ပါ။ ကိရိယာဝက်ဘ်စာမျက်နှာရှိလိပ်စာလင့်ခ်ကိုနှိပ်ပါ။
၁။ Safari ကိုဖွင့်ပါ။ Bonjour အား Bookmarks menu နှင့် Favorites bar တွင်ထည့်သွင်းထားကြောင်းသေချာပါစေ။ Safari ၏ Preferences> Advanced သို့ သွား၍ Bonjour box တစ်ခုစီကိုသေချာစွာရွေးပါ။
၂။ Bonjour အား Bookmarks menu သို့မဟုတ် Favorite bar တွင်ရှာ။ Linksys Extender ကိုရွေးချယ်ပါ။ အကယ်၍ သင်၏ network name နှင့် password ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါက network ကိုရွေးချယ်ပါ။
အကွာအဝေး extender setting များကိုအသုံးပြုခြင်း
မျက်နှာပြင်ရွေးချယ်စရာများအတွက်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်မျက်နှာပြင်၏ညာဘက်ရှိအကူအညီကိုနှိပ်ပါ။ မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေရှိသိမ်းဆည်းခြင်းကိုမနှိပ်မချင်းချိန်ညှိချက်များပြောင်းလဲခြင်းသည်ထိရောက်မှုမရှိပါ။ မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆိုဖယ်ရှားရန်သင်သည်လည်း Cancel ကိုနှိပ်ပါ။
Wi-Fi Protected Setup ကသင်၏ Extender ကိုသင်၏ network နှင့်လွယ်ကူစွာဆက်သွယ်နိူင်ပြီး extender မှတစ်ဆင့်အခြား network များကိုသင်၏ network နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
extender ကိုရှိပြီးသား access point သို့ဆက်သွယ်ခြင်း
သင်၏ access point သို့မဟုတ် router က၎င်းကို support လုပ်လျှင် range extender ကို Access point or router နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် Wi-Fi Protected Setup ကိုသုံးနိုင်သည်။ browser-based utility သို့ log and navigation ဘယ်ဘက်ရှိ WPS ကိုနှိပ်ပါ။ extender ကိုဆက်သွယ်ရန်အတွက်အောက်ဖော်ပြပါ setup နည်းလမ်းများမှရွေးချယ်ပါ။
သင့်မှာ Wi-Fi Protected Setup ကိုမပံ့ပိုးနိုင်တဲ့ access point တစ်ခုသို့မဟုတ် router တစ်ခုရှိလျှင်၊ wireless settings ကိုသတိပြုပါ။ ပြီးတော့ extender ကိုကိုယ်တိုင် configure လုပ်ပါ။
သင်၏ router သို့မဟုတ် access point တွင် Wi-Fi Protected Setup ခလုတ်ရှိပါကဤနည်းလမ်းကိုသုံးပါ
၁။ Extender ရှိ Wi-Fi Protected Setup ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သင့်တွင် dual-band router ရှိပါကဒုတိယ network ကိုတိုးချဲ့ရန်ထပ်မံလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။ 1GHz band ကိုပထမ ဦး ဆုံးတိုးချဲ့လိမ့်မည်။
၂။ Router မှ Wi-Fi Protected Setup မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ Wi-Fi Protected Setup Burton ကိုနှိပ်ပါ (ရှိခဲ့လျှင်) OR router ပေါ်ရှိ Wi-Fi Protected Setup ခလုတ်ကိုတစ်စက္ကန့်ဖိ။ ဖိထားပါ။ ဆက်သွယ်မှုပြီးသွားတဲ့အခါ extender ပေါ်ရှိ Wi-Fi Protected Setup light သည်အစိုင်အခဲဖြစ်လိမ့်မည်။
၃။ Extender ၏ Wi-Fi Protected Setup မျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုပါကထိုမိနစ်နှစ်ခုအတွင်း OK ကိုနှိပ်ပါ။
ဘယ်ဘက် navigation bar ရှိ WPS ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် WPS ကိုဘရောက်ဇာအခြေပြု utility မှသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Range Extender PIN နံပါတ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ
Wi-Fi Protected Setup PIN (Personal Identification နံပါတ်) ကို Extender ၏အနောက်ဘက်ရှိကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ သင်၏ Router အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွင် Wi-Fi Protected Setup menu ရှိမှသာသင် Method ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
Exterder Pin ကို Router ၏ Wi-Fi Protected Setup မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိသင့်လျော်သောကွက်လပ်ထဲသို့သွင်းပါ။ Register ကိုနှိပ်ပါ။ ဆက်သွယ်မှုပြီးသွားရင် extender ပေါ်ရှိ Wi-Fi Protected Setup light သည်အစိုင်အခဲဖြစ်လိမ့်မည်။
၂၊ OK ကိုိံပ်ြပ။ ။
extender မှတစ်ဆင့်သင်၏ network သို့ devices များချိတ်ဆက်ခြင်း
သင်၏ကွန်ယက်သို့ Wi-Fi Protected Setup ကိုထောက်ပံ့သောကိရိယာများကိုချိတ်ဆက်ရန်အောက်ပါနည်းလမ်းများမှရွေးချယ်ပါ။ အောက်ပါမျက်နှာပြင်ကိုဖျက်ပါ
Wi-Fi Protected Setup ကိုထောက်ပံ့သည့် client device တစ်ခုစီအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များကိုထပ်မံလုပ်ပါ။
သင်၏ client စက်တွင် Wi-Fi Protected Setup ခလုတ်ရှိပါကဤနည်းလမ်းကိုသုံးပါ။
၁။ client device ရှိ Wi-Fi Protected Setup ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
၂။ Extender ၏ Wi-Fi Protected Setup မျက်နှာပြင်ရှိ Wi-Fi Protected Setup ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သို့မဟုတ် extender ၏ဘေးရှိ Wi-Fi Protected Setup ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ဖိထားပါ။ ဆက်သွယ်မှုပြီးသွားရင် extender ပေါ်ရှိ Wi-Fi Protected Setup light သည်အစိုင်အခဲဖြစ်လိမ့်မည်။
၃။ Extender Wi-Fi Protected Setup မျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုပါကနှစ်မိနစ်အတွင်း OK ကိုနှိပ်ပါသို့မဟုတ်သင်စတင်ရန်လိုအပ်သည်။
Client Device PIN နံပါတ်နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း
သင်၏ client စက်တွင် Wi-Fi Protected Setup PIN (Personal Identification Number) ရှိပါကဤနည်းလမ်းကိုသုံးပါ။
Extender Wi -Fi Protected Setup မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ Device မှ PIN ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
၂။ Extender Wi-Fi Protected Setup မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ Register ကိုနှိပ်ပါ။ ဆက်သွယ်မှုပြီးသွားတဲ့အခါ extender ပေါ်ရှိ Wi-Fi Protected Setup light သည်အစိုင်အခဲဖြစ်လိမ့်မည်။
၂။ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း Extender Wi-Fi Protected Setup မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ OK ကိုနှိပ်ပါ။ သို့မဟုတ်သင်စတင်ပါလိမ့်မည်။
Extender PIN နံပါတ်နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း
သင်၏ Client စက်သည် Extender PIN ကိုတောင်းလျှင်ဤနည်းကိုသုံးပါ။
၁။ Client Device တွင် Extender Wi-Fi Protected Setup မျက်နှာပြင်တွင်စာရင်းလုပ်ထားသော PIN နံပါတ်ကိုထည့်ပါ။ (၎င်းကို extender ၏နောက်ဖက်ရှိ product label တွင်လည်းဖော်ပြထားသည်။ ) ဆက်သွယ်မှုပြီးဆုံးသွားသောအခါ extender ပေါ်ရှိ Wi-Fi Protected Setup light သည်အစိုင်အခဲဖြစ်လိမ့်မည်။
၂။ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း Extender Wi-Fi Protected Setup မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် OK ကိုနှိပ်ပါ။
Site Survey သည်အိမ်နီးချင်း access point များနှင့် extender ၏အကွာအဝေးအတွင်းရှိ wireless router များအားလျှပ်တစ်ပြက်ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။
၁။ Browser ကိုအခြေခံသည့် Utility (စာမျက်နှာ ၅ ရှိ Browser ကိုမည်သို့ ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုမည်) ကိုကြည့်ပါ။
၂။ ကြိုးမဲ့ tab ကိုနှိပ်ပါ။ ဆိုက်စစ်တမ်းစာမျက်နှာကိုနှိပ်ပါ။
၃။ ရွေးရန်။ ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်တစ်ခုချိတ်ဆက်ရန် ၀ င်ပါကော်လံရှိကြိုးမဲ့ကွန်ယက်အမည် (SSID) ဘေးရှိခလုပ်ကို နှိပ်၍ Connect ကိုနှိပ်ပါ။
SSID - အိမ်နီးချင်းကြိုးမဲ့ကွန်ယက်များ၏နာမည်ကိုပြသည်။
5. GHz? အနီးအနားရှိကြိုးမဲ့ကွန်ယက်များ၏ရေဒီယို band (GHz) ကိုပြသသည်
၆။ Signal Strength? အိမ်နီးချင်းဆက်သွယ်ရေးနေရာများ၏အခြေအနေကိုပြသခြင်းဖြင့်ရရှိသောကြိုးမဲ့အချက်ပြစွမ်းအားကိုပြသည်။ dot = 6%, dot + one
လှိုင်း = 50%, အစက် + နှစ်ခုလှိုင်း = 75%, အစက် + သုံးလှိုင်း = 100% ။ အကယ်၍ လှိုင်းတံပိုးများမပြသပါကသင်၏တိုးချဲ့သူသည်အထက်စီး ၀ င်ခွင့်နေရာမှဝေးလွန်းသည်သို့မဟုတ်အချက်ပြမှုကိုပိတ်ဆို့ထားသည်။ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် signal ကို ၆၀% မှ ၁၀၀% ကြားတွင်ထားရန်ကြိုးစားပါ။
၇။ လုံခြုံရေး - အနီးအနားရှိ AP များအသုံးပြုသောလုံခြုံရေး mode ကိုပြသသည်။ အကယ်၍ ကွန်ယက်သည် Wi-Fi ကာကွယ်မှုတည်ဆောက်ပုံကိုထောက်ခံပါက Wi-Fi Protected Setup အိုင်ကွန်ကိုလည်းပြလိမ့်မည်။
သင်၏ Extender အား Access point (သို့) router နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် Site Survey ရှိဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်၏စကားဝှက်သို့မဟုတ် passphrase ကိုသိရန်လိုအပ်သည်။
၁။ Selender ကော်လံရှိသက်ဆိုင်ရာခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး extender နှင့်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်လိုသောကွန်ယက်အမည် (SSID) ကိုရွေးချယ်ပါ။
Connect ကိုနှိပ်ပါ။ သင့်အားအချက်ပြသောအခါသင်၏ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုလုံခြုံစေရန်အသုံးပြုသောစကားဝှက်သို့မဟုတ်စကားဝှက်ကိုရိုက်ပါ။ ဒီဖန်သားပြင်တွင်လိုအပ်သောလုံခြုံရေးအချက်အလက်အမျိုးအစားသည်သင်၏ Access ကိုအများကြီးလိုအပ်သည်။
သိကောင်းစရာ - dual-band ကွန်ရက်များအတွက်၊ 2.4 GHz နှင့်5GHz နှစ်ခုလုံးကိုချိတ်ဆက်ရန်သေချာပါစေ။
၃။ သိမ်းရန် (Save) ကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏ extender wireless parameters များကိုပြုပြင်သင့်သည်။ ကြိုးမဲ့ interface သည်ပြန်လည်စတင်ပါလိမ့်မည်။ သင်၏ extender သည်သင်ရွေးချယ်ထားသော access point သို့မဟုတ် router သို့ဆက်သွယ်လိမ့်မည်။
Cross-Band သည်မြန်နှုန်းမြင့် data transfer နှင့်မပြတ်သော streaming များနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းများအတွက် band နှစ်ခုလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်။ သင်၏ RE6700 သည် 2.4GHz နှင့်5GHz ကွန်ယက်များတွင်အလုပ်လုပ်သည်။
သင်၏ extender ကို ဆက်သွယ်၍ မရပါ
သင်၏ router နှင့် extender တို့၏အနေအထားကိုစစ်ဆေးပါ
? ပထမဆုံးအကြိမ် setup လုပ်ရန် extender ကို router နှင့်နီးကပ်စွာထားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်၏ extender ကို setup လုပ်ပြီးသောအခါ၎င်းကိုဖြုတ်။ နောက်ဆုံးနေရာမှရွှေ့နိုင်သည်။
? signal ပိတ်ဆို့မှုကိုလျှော့ချရန် router နှင့် extender တို့၏အခြားတည်နေရာများကိုကြိုးစားပါ။
? Router နှင့် extender ကိုသတ္တုပစ္စည်းများ၊ ပန်းရံနံရံများနှင့်ဖန်သားသို့မဟုတ်ကြေးမုံကဲ့သို့ရောင်ပြန်မျက်နှာပြင်များအနီးတွင်မထားပါနှင့်။
? router နှင့် extender ကိုအခြားအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများအနီးတွင်ထားခြင်းကိုရှောင်ပါ။
သင်ဆက်သွယ်ရန် Wi-Fi ကာကွယ်ထားသည့်တည်ဆောက်မှုကိုအသုံးပြုပါက Wi-Fi ကာကွယ်ထားသည်အထိစောင့်ပါ
ဆက်သွယ်မှုကိုထပ်မံပြုလုပ်ရန်မကြိုးစားမီ Setup ညွှန်ပြချက်သည်မီးမငြိမ်းပါ။
သင်၏ range extender ကိုသင် ဆက်သွယ်၍ မရပါ။ သင်၏ range extender ကိုရယူရန်သင့်ကိုယ်ပိုင် network နှင့်ချိတ်ဆက်ထားရမည်။ သင်၌လက်ရှိအင်တာနက်ကြိုးမဲ့စနစ်ရှိပါကမတူညီသောကြိုးမဲ့ကွန်ယက်တစ်ခုကိုမတော်တဆချိတ်ဆက်မိခြင်းကြောင့်ပြtheနာဖြစ်နိုင်သည်။
Mac ညွှန်ကြားချက်အတွက် MAC အပိုင်းကိုကြည့်ပါ။
၁။ သင်၏ Windows Desktop ပေါ်တွင် system tray ရှိ wireless icon ကိုညာဖက်နှိပ်ပါ။ မည်သည့် ၀ င်းဒိုးဗားရှင်းပေါ် မူတည်၍ အိုင်ကွန်သည်ကွဲပြားနိုင်သည်။
၂။ View Available Wireless Networks ကိုနှိပ်ပါ။
၃။ သင်၏ network name ကိုရွေးပါ။ Connect ကိုနှိပ်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါဥပမာတွင်ကွန်ပျူတာသည် JimsRouter အမည်ရှိအခြားကြိုးမဲ့ကွန်ယက်တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ မှန်ကန်သောကွန်ယက်အမည်၊ ဤဥပမာတွင် BronzeEagle ကိုရွေးချယ်သည်။
၄။ အကယ်၍ သင့်အား network key ထည့်ရန်ပြောလာပါကသင်၏စကားဝှက် (Security Key) ကို Network key ထဲသို့ရိုက်ထည့်ပြီး network key နေရာလပ်များကိုအတည်ပြုပါ။ Connect.Ye ကို နှိပ်၍ Range Extender Browser-based utility ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
Mac ကွန်ပျူတာများရှိပြtheနာကိုဖြေရှင်းရန် -
၁။ ဖန်သားပြင်ထိပ်ရှိမီနူးဘားတွင် Wi-Fi အိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပါ။ Linksys Connect သည်သင်၏ကွန်ယက်အမည်ကိုအလိုအလျောက်သတ်မှတ်ပေးသည်။ အောက်ဖော်ပြပါဥပမာတွင်ကွန်ပျူတာသည် JimsRouter အမည်ရှိအခြားကြိုးမဲ့ကွန်ယက်တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဤဥပမာတွင် Linksys E-Series ကွန်ယက်၏အမည်၊ BronzeEagle ကိုရွေးချယ်သည်။
၃။ သင်၏ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်စကားဝှက် (လုံခြုံရေးသော့) ကိုစကားဝှက်နေရာတွင်ရေးထည့်ပါ။ OK ကိုနှိပ်ပါ။
ယခုသင်သည် Extender Browser-based utility ကိုရယူနိုင်ပါပြီ။
Wi-Fi မပါပဲသင်၏ router နှင့်betweenရိယာအကြားရှိအကွာအဝေးကိုဖြတ်သန်းသွားတဲ့အကွာအဝေးကိုဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏ချိန်ညှိမှုအတွက်အသုံးပြုသောကိရိယာပေါ်တွင်သင်၏ Router Wi-Fi အချက်ပြမှု၏အနည်းဆုံး ၅၀% ရှိသည်။
Model Name Linksys RE6300 / RE6400
Model ဖော်ပြချက် Dual-band Wireless-AC Range Extender
မော်ဒယ်နံပါတ် RE6300 / RE6400
စံသတ်မှတ်ချက်များ IEEE 802.11ac, 802.11a, 802.11n, 802.11g,
Gigabit Ethernet ဆိပ်ကမ်းများ၊ အသံ
LEDs ပါဝါ / ဝိုင်ဖိုင်ကာကွယ်မှုတည်ဆောက်မှု၊ Ethernet (link,
အင်တင်နာ ၂ ပြင်ပ (ဖြုတ်။ မရ)
ကြိုးမဲ့လုံခြုံရေး Wi-Fi ကို
Security Key သည် 128-bit အထိစာဝှက်နိုင်သည်
အရွယ်အစား 2.64 ???? 1.49 ???? 4.13 ???? 67 x ကို 38 x ကို 105 မီလီမီတာ)
အလေးချိန် ၅.၁၂ အောင်စ (၁၄၅ ဂရမ်)
ပါဝါ 12VDC / 1.0A
FCC, ICES-003, RSS210, CE, Wi-Fi လက်မှတ်
လည်ပတ်မှုအပူချိန် 32 to 104 ° F (0 မှ 40 ° C)
သိုလှောင်သည့်အပူချိန် -4 မှ 140 ° F (-20 to 60 ° C)
operating စိုထိုင်းဆ 10 မှ 80% noncondensing
သိုလှောင်စိုထိုင်းဆ5မှ 90% noncondensing
ဆုရသည့် ၂၄/၇ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုအတွက် linksys.com/support ကိုကြည့်ရှုပါ
BELKIN, LINKSYS နှင့်ကုန်ပစ္စည်းနာမည်နှင့်အမှတ်တံဆိပ်များသည် Belkin ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ဖော်ပြခဲ့တဲ့တတိယပါတီအမှတ်တံဆိပ်ဟာသူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်။ ဤထုတ်ကုန်တွင်အသုံးပြုသောတတိယပါတီဆော့ဝဲအတွက်လိုင်စင်နှင့်အသိပေးချက်များကိုဤနေရာတွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည် - http://support.linksys.com/en-us/license ကျေးဇူးပြု။ ဆက်သွယ်ပါ
© 2015 Belkin International, Inc နှင့် / သို့မဟုတ် ၄ င်း၏တွဲဖက်များ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။
ဤကိရိယာသည် FCC စည်းကမ်းချက်များ၏အပိုင်း ၁၅ နှင့်ကိုက်ညီသည်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်နှစ်ချက်ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ (၁) ဤစက်သည်အန္တရာယ်ရှိသောအနှောင့်အယှက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေမည်မဟုတ်ပါ။ (၂) ဤစက်သည်မလိုလားအပ်သောလည်ပတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အနှောင့်အယှက်များအပါအ ၀ င်မည်သည့် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုမဆိုလက်ခံရမည်။
ဒီပစ္စည်းကိရိယာများကို FCC စည်းမျဉ်းများအပိုင်း ၁၅ အရ Class B ဒစ်ဂျစ်တယ်ကိရိယာအတွက်ကန့်သတ်ချက်များနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဤကန့်သတ်ချက်များသည်လူနေအိမ်ခန်းများတပ်ဆင်ခြင်းတွင်အန္တရာယ်ရှိသော ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းများမှသင့်လျော်သောအကာအကွယ်ပေးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဤကိရိယာသည်ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းစွမ်းအင်ကိုထုတ်လွှတ်သည်။ အသုံးပြုသည်။ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီတပ်ဆင်။ အသုံးမပြုပါကရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သို့သော်၊ အထူးသဖြင့်တပ်ဆင်ခြင်းတစ်ခုတွင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများမဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါ။ အကယ်၍ ဤစက်ပစ္စည်းသည်ရေဒီယို (သို့) ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုခြင်းကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေသောပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်စေပါကပစ္စည်းကိရိယာများကိုပိတ်ထားခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ခြင်းအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်၊ အသုံးပြုသူအား ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုအောက်ပါအတိုင်းအတာတစ်ခုမှဖြေရှင်းရန်တိုက်တွန်းပါသည်။
- ပစ္စည်းကိရိယာအားလက်ခံသူ၏ချိတ်ဆက်ထားသည့်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ကွဲပြားသော circuit တစ်ခုရှိ outlet တစ်ခုသို့ဆက်သွယ်ပါ။
- အကူအညီအတွက်ကုန်သည်သို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံရှိရေဒီယို / တီဗီပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
FCC သတိပေးချက် - လိုက်နာမှုအတွက်တာဝန်ရှိသူအဖွဲ့မှခွင့်ပြုချက်မရဘဲအပြောင်းအလဲများသို့မဟုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများသည်ဤပစ္စည်းကိရိယာကိုအသုံးပြုရန်အသုံးပြုသူ၏အခွင့်အာဏာကိုပျက်ပြယ်စေနိုင်သည်။ ဤသည် transmitter ကိုအတူတကွတည်ရှိသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အင်တင်နာသို့မဟုတ် transmitter ကိုနှင့်တွဲဖက်။ လည်ပတ်မရရပါမည်။ ၅.၁၅ မှ ၂၅.၂၅GHz band အတွင်းလုပ်ဆောင်မှုကိုမိုးလုံလေလုံအသုံးပြုမှုကိုသာကန့်သတ်ထားသည်။
ဒီကိရိယာသည်ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောပတ် ၀ န်းကျင်အတွက်သတ်မှတ်ထားသည့် FCC ဓါတ်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုကန့်သတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဤပစ္စည်းကိရိယာကိုတပ်ဆင်။ အနိမ့်ဆုံးအကွာအဝေး ၂၀ စင်တီမီတာဖြင့်ရေဒီယိုစက်နှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အကြားလည်ပတ်သင့်သည်။
မှတ်စု: နိုင်ငံ၏ကုဒ်ရွေးချယ်မှုသည်အမေရိကန်မဟုတ်သောပုံစံအတွက်သာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်မော်ဒယ်အားလုံးအတွက်မရနိုင်ပါ။ FCC စည်းမျဉ်းအရ US တွင်ရောင်းချသော WiFi ထုတ်ကုန်များအားလုံးသည် US operation channel များ၌သာတပ်ဆင်ရမည်။
ဤကိရိယာသည်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကနေဒါနည်းဥပဒေ၏ RSS-210 နှင့်ကိုက်ညီသည်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်နှစ်ချက်ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ (၁) ဤစက်သည်အန္တရာယ်ရှိသောအနှောင့်အယှက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
(ဈ) 5150-5250 MHz တီးဝိုင်းအတွင်းလည်ပတ်မှုအတွက်ကိရိယာသည်ပူးတွဲချန်နယ်မိုဘိုင်းဂြိုဟ်တုစနစ်များအားအန္တရာယ်ဖြစ်စေသောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအလားအလာကိုလျှော့ချရန်အတွက်မိုးလုံလေလုံအသုံးပြုရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။
(၂) စွမ်းအင်မြင့်ရေဒါများကိုအဓိကအသုံးပြုသူများ (ဆိုလိုသည်မှာ ဦး စားပေးသုံးစွဲသူများ) အနေဖြင့် 5250-5350 MHz နှင့် 5650 - 5850 MHz နှင့်၎င်းရေဒါများသည် LE-LAN ​​ကိရိယာများကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပျက်စီးစေနိုင်ကြောင်းခွဲဝေချထားသည်။
ဒီကိရိယာသည်ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောပတ် ၀ န်းကျင်အတွက်သတ်မှတ်ထားသော IC ဓါတ်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုန့်သတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဒါ
ပစ္စည်းကိရိယာများကိုတပ်ဆင်။ လည်ပတ်သင့်သည်မှာအနည်းဆုံးအကွာအဝေး ၂၇ စင်တီမီတာနှင့်ရေတိုင်ကီနှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြားတွင်ဖြစ်သည်။
သင်၏ Linksys RE6300 / RE6400 နှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းများ။ မှတ်ချက်များအတွက်တင်!
Linksys RE6300 / RE6400 လက်စွဲကို download လုပ်ပါ။
Linksys RE6300 / RE6400 အသုံးပြုသူလမ်းညွှန် အသုံးပြုသူလမ်းညွှန် RE6300 / RE6400 နိဒါန်းဤသုံးစွဲသူလမ်းညွှန်သည်သင့်ကိုကူညီနိုင်သည်။
Linksys RE6300, RE6400 Setup လမ်းညွှန် / အသုံးပြုသူလက်စွဲ LINKSYS အသုံးပြုသူလမ်းညွှန် RE6300 / RE6400 နိဒါန်းဤအသုံးပြုသူလမ်းညွှန်ကကူညီနိုင်သည်။
Linksys Velop အသုံးပြုသူလက်စွဲ Linksys Velop အသုံးပြုသူလက်စွဲ - အကောင်းဆုံး PDF Linksys Velop အသုံးပြုသူ ...
LINKSYS CM3024 24 × 8 Cable Modem အသုံးပြုသူလက်စွဲ LINKSYS CM3024 24 × 8 Cable Modem အသုံးပြုသူလက်စွဲ ...
Linksys 16-Port / 24-Port Desktop Gigabit Switch အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်လက်စွဲ [LGS116, LGS124] Linksys မစီမံခန့်ခွဲမှု 16-Port Desktop Gigabit Switch (LGS116) 24-Port Gigabit ...
Posted by ကိုadmin ရဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ 21, 2019 Posted in,LinksysTags: တိုးချဲ့, linkys, Router က
SoundCore Liberty Air အသုံးပြုသူလက်စွဲ
Skullcandy Inkd + ကြိုးမဲ့နားကြပ်လက်စွဲစာအုပ်
mpow Neckband ကြိုးမဲ့အသုံးပြုသူလက်စွဲ
CONCEPTRONIC Enclosure USB-C 3.1 Gen2အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
FARSEEING LED Studio အသုံးပြုသူလက်စွဲ
ရော့ဒ်နီ O'Connor on Roku Streambar လျင်မြန်စွာစတင်လမ်းညွှန် 4100000641_1
Glenn on အသုံးပြုသူလက်စွဲ JBL Live 400 BT / Live 500 BT နားကြပ်